Shiileeyaha saliid-la'aanta ee Innsky: fikradda, soo jeedinta iyo in ka badan. mudan
Diyaaradda Philips Airfryer HD9621/90
Acifry Express Cunto fudud
Cecofry Compact Degdeg ah
Moulinex fudud shiilan
Shiilan saliid la'aan ah Innsky
Waxaan rabnaa inaan bedelno caadooyinka maalinlaha ah ee cuntadeenna, taasna, waxaan had iyo jeer haysanaa caawimo ama dhiirigelin sida Shiilan saliid la'aan ah Innsky. Maadaama tignoolajiyadadeedu ay ku saleysan tahay nidaamka kulaylka sida caadiga ah. Maxaa foornadaas ka dhigaysa mid u muuqata, xagga bilicdeeda iyo dhammaadka suxuunta, labadaba.
Shiilan la mid ah kan aan kuu soo bandhigno ayaa waxtar weyn kuu yeelan doona maalinba maalinta ka dambeysa. Sababtoo ah waxay nagu badbaadin doontaa waqti badan jikadaWaxaan samayn doonaa suxuun cajiib ah oo ka badan textures delicious iyo sababtoo ah waa ugu fudud in la isticmaalo. Sidaa darteed, had iyo jeer waxay noqon doontaa dareenkaas aan soo sheegnay si aan u daryeelno nafteena laakiin sida ugu fudud. Ma rabtaa inaad ogaato sida?
Iyada oo la dhimay
Innsky Fryer oo aan lahayn ...
Tilmaamaha Fryer Innsky
10 in 1 mishiin
Waxaan uga hadalnaa sidii Innsky Oilless Fryer. Laakiin dabcan waxaad haysataa fursado badan oo badan marka ay timaado cunto karinta. Tan iyo markii aan odhan karno in ay sidoo kale waa foornada, halkaas oo Waxaad samayn kartaa diyaargarow kala duwan laga bilaabo macmacaanka ilaa pizza-yada ugu macaan. Dhanka kale, sidoo kale waa shiilan iyo xitaa fuuq-baxa miraha. Maadaama heerkulkeedu kala duwanaan karo iyadoo ku xiran tahay inaad dubanayso cuntada ama aad dubayso, sidaas awgeed waxay nooga tagaysaa suxuunta ugu macaan.
fududahay in la isticmaalo oo badbaado leh
Mid ka mid ah faahfaahinta aan eegno marka la iibsanayo shiilan saliid la'aan ah Innsky waa in ay fududahay in la isticmaalo. Xaaladdan oo kale, waanu saxnay sababtoo ah waa nooc dareen leh. Marka la eego Waxay leedahay shaashad aad ka dooran karto habka karinta. Intaa waxaa dheer, ma werwerin kartid sababtoo ah waxay leedahay nidaam wareeg ah, sidaas oo kale, ayaa isku rogi doona cuntada lafteeda. Uma baahnid in aad ka digtoonaato in aad soo jeediso! Intaa waxaa dheer, waxaad arki kartaa meesha saxanka aad jeceshahay ay ku jirto iftiinka gudaha ee uu leeyahay. Haddii aadan jeclayn karinta ama haddii aadan aqoon sida loo kariyo, hadda waxay u ekaan doontaa liddi ku ah fryer.
Heerkulka wuxuu u dhexeeyaa 80ºC ilaa 200ºC
Inkasta oo mudnaanta aynaan ogaanin isaga, waa run taas Heerkulka heerkulka waa mid kale oo ka mid ah qodobbada wanaagsan ee la tixgeliyo. Sababtoo ah, sida kiiskan oo kale, fursadaha kala duwan ayaa aad u ballaaran tani waxay u tarjumaysaa doorashooyin badan marka ay timaado cunto karinta. Way kulushahay in la dubayo ama la shiilo oo la dubay. Kuleylku si dhakhso ah ayuu u qulquli doonaa iyada oo ay u mahadcelinayaan taageere gudaha ah.
Si fudud ayaa loo nadiifin karaa
Marka laga soo tago karinta karinta iyada oo aan wax bakhti ah ku dhex jirin jikada, shiilan saliid la'aan ah oo Innsky ah oo sidan oo kale ah ayaa sidoo kale na badbaadisa wakhtiga nadiifinta. Sababtoo ah Qaybaheeda oo dhan waa laga saari karaa oo lagu dhaqi karaa makiinada weelka dhaqda, haddii aad rabto. Xitaa waxaad ka saari kartaa albaabka foornada si aad u nadiifiso. Haddii aad gacanta ku dhaqdo, xasuusnoow in saabuun khafiif ah oo daryeesha dusha sare iyo isbuunyo ama maro iyagana ka sii fiican ay mar walba ka wanaagsan tahay. Haddii isticmaal kasta ka dib aad qaadato tallaabadan, waxaad had iyo jeer yeelan doontaa in ka badan si qumman.
Awoodda 10 litir
Wax dhib ah nagama yeelan doono marka la karinayo. Sababtoo ah leh awoodda 10 litir ayaa ku filnaan doonta quudinta qoys ballaaran. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaanu samayno cunto hal mar wax ka badan ka dibna ku hayno talaajadda. Sidoo kale, ka fikir inaad samayn karto laba saxan, si aan qofna u sugin menu caafimaad leh iyo in waxaas oo dhan lagu daro, waxay leedahay cabbir siman.
Waa mid ka mid ah tas-hiilaadka ugu wanaagsan ee Shiilan-la'aanta saliidda Innsky na siiso. Sababtoo ah Thanks to daaqadeeda hore waxaan arki karnaa sida barta karinta ay u socoto mar walbana is deji. Intaa waxaa dheer in la leeyahay nalal lagu daro, si aan wax u seegin mar kasta.
1500 W awood
Sidoo kale Awoodeeda ayaa nagu hogaaminaysa inaan ka hadalno qalab weyn. Maadaama ay noo ogolaan doonto inaan si degdeg ah oo hufan u samayno dhammaan noocyada suxuunta. Maxaa nooga tagaya menus aad u kala duwan waana awooddeeda cidda iyaduna eedda leh. Had iyo jeer waxaad heli doontaa dhammaystirka aad runtii rabto, taas oo ah, shiilan sidan oo kale ah waxay noqon doontaa saaxiib weyn noloshaada.
Innsky Oil Agabka Fryer Free
Saxarada fuuqbaxa: Sida magaceeda ka muuqata, kuwani waa saxaarad aad isticmaali karto si aad u fuuq baxdo. Laakiin waxa intaa ka sii badan, sidoo kale waa taageerooyinka ugu fiican ee lagu kari karo dhowr marxaladood. Si aad ugu raaxaysato dhowr suxuun hal mar quraacda, adiga oo had iyo jeer badbaadinaya wakhti iyo tamar.
Skewers for dubaySkewers waa qalab kale oo aan jecelnahay. Sababtoo ah waxaan samayn karnaa hilibka ama khudaarta skewers mar kasta oo aan rabno. Maxaa naga dhigi doona in aan ku raaxaysanno cuntada duban ama barbecue in ka badan laakiin laga bilaabo shiilayadeena qoto dheer. Skewers xooggan, oo leh qaab qumman si ay u xajiyaan oo ay u helaan natiijooyinka ugu fiican.
Dambiisha durbaanka ee jajabyada baradhada: Waxay si gaar ah ugu habboon tahay shiilan Faransiiska. Sababtoo ah waxay ku saabsan tahay dambiil si fudud loo dhex geliyo oo wareegta. Maxaa ka dhigaya hawada kulul inay si fiican u gasho natiijada cuntaduna way ka sii xumaanaysaa intii la filayay. Sidaa awgeed, aad bay guul u tahay in la arko sida cuntooyinkani u jajabaan sida aan u jecelnahay.
Rotisserie digaag: Haddii aad rabto inaad hesho digaag duban waqti yar iyo dadaal yar, ka dibna qalabkan waxaad ka heli doontaa. Nooc ka mid ah skewer oo ku dheggan hilibka laftiisa ka dibna ku dheggan labada dhinac ee shiilan. Tani waxay qabataa shaqo la mid ah dambiisha ama dambiisha aan soo sheegnay. Tan iyo markii ay u rogi doonto si hilibku u noqdo mid isku mid ah.
Saxanka faleebada: Si marka ay timaado nadiifinta wax walba ay u dhaqso badan yihiin, ma jiraan wax la mid ah sharadka saxanka dhibicda. Waxa la dhigayaa qaybta hoose iyo dusheeda dhammaan cuntada aanu ku karsanayno. Sidaan ognahay. Inkasta oo aynaan si dhib leh u isticmaalin saliidda, cuntooyinkan ayaa had iyo jeer leh casiir laga saaro xilliga karinta. Markaa saxaarad sidan oo kale ah ayaa daryeeli doonta soo ururinta si ay hadhow u samayso suugo ama u tuurto.
Fargeeto duban: Marka ay timaaddo daloolinta ama saarista hilibka, waxaan sidoo kale u baahanahay wax noo gaar ah. Maxaa ka fiican in lagu sharadeeyo fargeetada barbecue. Waxay ka kooban tahay gacan raaxo leh iyo laba furin oo fican, oo ku raaxaysan in ay si fiican u xajistaan ​​qaybaha hilibka ee aan dubnay.
Sida uu u shaqeeyo Shiidaalka Innsky ee Fryer-ka Bilaashka ah
Xaqiiqdu waxay tahay in ay tahay hawl aad u degdeg badan oo fudud. Sababtoo ah, Waa in aan nidhaahnaa marka hore waa in aad shid oo aad ku dartaa qaado oo saliid ah, Hadday arrintu sidaas tahay. Oo waxaad ku samayn doontaa weelka wax lagu karsado. Waxaad dhigi kartaa dambiisha oo aad sugi kartaa dhowr daqiiqo ilaa uu shiilanku kululaado. Waxaad ogaan doontaa inay diyaar tahay sababtoo ah waxay leedahay tilmaame ku ogeysiin doona.
Hadda waa waqtigii aad albaabkaaga furi lahayd, cDhig cuntada aad diyaarinayso oo hagaaji wakhtiga iyo heerkulka, sida ku cad saxanka. Maadaama guddigeeda aad ka arki karto sida aad u leedahay calaamado taxane ah oo aad ka dooran karto iyadoo ku xiran haddii ay tahay hilib, kalluun, pizzas, iwm.
Ma noqon doonto mid adag, sababtoo ah waxay leedahay 10 barnaamij oo horeyba loo habeeyey tallaabooyinkan oo runtii ah kuwa aasaasiga ah ee kuu qaban doona dhammaan shaqada adiga. Inkasta oo haddii aad rabto dhammaystirka crunchier xitaa, markaa waxaad samayn kartaa barnaamij sida waafaqsan baahiyahaaga.
Fryer-ka Innsky ma la yimaadaa buug cunto karinta?
Haa, shiilayuhu waxa uu leeyahay buug cunto karin ah si aad u ogolaato in mala-awaalkaaga uu duulo oo had iyo jeer miiskaaga ku haysto fikrado menu-ka yaab leh. Waxay leedahay suxuunta nooc kasta ah, taas oo aad ka heli doonto cunto kariye aad u faahfaahsan, oo leh cuntooyin aasaasi ah iyo kuwo caafimaad qaba, marka lagu daro cayimida wakhtiga karinta iyo kuwa qadeeya.
Waxa kale oo aad heli doontaa qayb la-talin ah iyo sidoo kale cabbirro, si aad u ogaato qaddarka saxda ah marka ay timaado diyaarinta dhammaan noocyada cuntooyinka. Adigoon iloobin inaad ku haysato dhowr luqadood.
Haddii aad weli shaki ka qabtid mawduuca heerkulka, waxaad jeclaan doontaa inaad ogaato in buug-gacmeedka cuntada oo dhan si fiican loo xusi doono, iyo sidoo kale wakhtiga diyaarinta iyadoo loo eegayo cadadka cuntada. Maxaa kale oo aan codsan karnaa?
Xusuusnow in qaybtayada buugaagta ku saabsan cuntada karinta ee saliida lagu kariyo Waxaad heli doontaa fikrado badan si aad uga faa'iidaysato shiilan qoto dheer ee Innsky.
Oo haddii aad jeceshahay oo aad rabto inaad ku iibsato qiimaha ugu fiican, markaa waxaad heli doontaa dalabka ugu fiican maanta si aad uga jabanto:
Ma waxaad raadinaysaa shiil aan saliid lahayn oo jaban? Noo sheeg inta aad rabto inaad kharash garayso
waxaana ku tusinaynaa fursadaha ugu fiican
* Dhaqaaq slider si aad u bedesho qiimaha
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Shiilan saliid la'aan ah Innsky
Saliida Jimcaha Madoow Fryers Free Free
Cyber ​​​​Isniinta shiilan saliid la'aan ah
Xuquuqda daabacaadda 2022 Raridda 24h - Dammaanad rasmi ah - Lacag bixin fudud